KDEApps5: Ngwa KDE Community maka egwuregwu | Site na Linux
KDEApps5: Ngwa KDE Community n'ọhịa egwuregwu
Linux Post Wụnye | 15/09/2021 06:00 | Emelitere ka 20/09/2021 18:23 | Aplicaciones, GNU / Linux
Taa, anyị na -aga n'ihu na ise nkebi «((KDEApps5) » site n'usoro isiokwu dị na "Ngwa KDE Community". Ma n'oge a anyị ga -eleba anya na ngwa nke ubi egwuregwu, ọ bụghị naanị maka ya ntụrụndụ dị mma mana maka ya mmụta.
Iji mee nke ahụ, gaa n'ihu na -enyocha katalọgụ sara mbara ma na -eto eto free na-emeghe ngwa mepụtara ha. N'ụzọ dị otu a, ịga n'ihu na -agbasawanye ihe ọmụma gbasara ha nye ndị ọrụ niile n'ozuzu ha GNU / Linux, ọkachasị ndị nwere ike ha anaghị eji «KDE Plasma » dị ka «Desktọpụ Environment» isi ma ọ bụ naanị.
KDEApps1: Ileba anya na ngwa KDE Community
Maka ndị nwere mmasị inyocha 4 anyị gara aga mbipụta ndị metụtara isiokwu ahụ, ị nwere ike pịa njikọ ndị a, ka ị gụchara akwụkwọ a:
KDEApps4: Ngwa obodo KDE maka njikwa ịntanetị
KDEApps3: Ngwa KDE Community maka njikwa eserese
1 KDEApps5: Ngwa egwuregwu maka ntụrụndụ na mmụta
1.1 Egwuregwu - Ngwa KDE (KDEApps5)
1.1.1 Ngwa 10 kachasị elu
1.1.2 Ngwa ndị ọzọ dị
KDEApps5: Ngwa egwuregwu maka ntụrụndụ na mmụta
Egwuregwu - Ngwa KDE (KDEApps5)
Na mpaghara a Egwuregwu, na "Obodo KDE" amalitela n'ihu ọha Ngwa 40 nke anyị ga -ekwu maka ya na ịza ajụjụ ya, n'ụzọ ederede na nkenke, 10 mbụ, mgbe ahụ anyị ga -ekwupụta 30 ndị fọdụrụ:
Ngwa 10 kachasị elu
Agha Naval: Ọ bụ egwuregwu ikpu ụgbọ mmiri. A na -etinye ụgbọ mmiri ndị ahụ n'ụgbọ na -anọchite anya oke osimiri. Ndị na -egwu egwuregwu na -agbagharị na -agbalị iru ụgbọ mmiri onye iro ha n'amaghị ebe ha nọ. Onye ọkpụkpọ mbụ nke bibiri ụgbọ mmiri niile nke onye iro ya meriri egwuregwu ahụ.
bombu: Ọ bụ egwuregwu ntụrụndụ maka otu onye egwuregwu. Onye ọkpụkpọ ahụ na -awakpo obodo dị iche iche na ụgbọ elu nke na -efe efe na ala. Ebumnuche nke egwuregwu a bụ ibibi ụlọ niile ka ọ gaa n'ọkwa ọzọ. Ọkwa ọ bụla na -esiwanye ike ka ọsọ ụgbọ elu na ịdị elu nke ụlọ na -abawanye.
Bovo: Ọ bụ egwuregwu maka ndị egwuregwu abụọ yiri Gomoku (site na Japanese 五 目 並 べ, nke pụtara "isi ise"). Ndị mmegide abụọ a na -atụgharị ibe ha wee tinye eserese eserese ha na bọọdụ egwuregwu. (A makwaara dị ka: "Jikọọ ise", "ise n'ahịrị", "X na O" ma ọ bụ "Zeros na obe").
Onye na -enye ihe: Ọ bụ mmepụta egwuregwu Bomberman a ma ama, nke sitere na ọrụ Clanbomber clone.
Kajongg: Ọ bụ egwuregwu bọọdụ China oge ochie maka ndị egwuregwu 4. Enwere ike ịkpọ Kajongg n'ụzọ abụọ dị iche iche: iji aka na -egwu egwu na iji Kajongg maka akara na ngụkọ ọnụ. Ma ọ bụ ịnwere ike iji Kajongg gwuo egwu ọ bụla nke mmadụ ma ọ bụ ndị na -egwu igwe.
Kapman: Ọ bụ ihe na-ewu ewu nke egwuregwu ama ama Pac-Man. N'ime ya, ị ga -agabiga na oke maze iri mkpụrụ ọgwụ niile na -enweghị mmụọ jidere gị. Site n'iji onye na -enye ume, Kapman na -enweta ikike iri mmụọ maka sekọnd ole na ole. Mgbe ọgwụ ọgwụ na ihe mgbochi gwụsịrị n'otu ọkwa, a na -akpọrọ onye ọkpụkpọ ahụ n'ọkwa ọzọ nke ga -agbatịkwu ọsọ egwuregwu.
KAtomik: Ọ bụ egwuregwu mmụta na -atọ ụtọ dabere na jiometrị molekul. Ọ na-eji echiche ihu abụọ dị mfe nke ihe kemịkal dị iche iche.
KBlackbox: Ọ bụ egwuregwu zoro ezo nke nwere igbe igbe nke igwe jiri zoo ọtụtụ bọọlụ. Enwere ike ịdọrọ ọnọdụ bọọlụ ndị a site na ụzarị ọkụ na igbe.
KBlocks: Ọ bụ egwuregwu ngọngọ na -ada ada. Echiche bụ ịkwakọba ngọngọ ndị na -ada ada iji mepụta ahịrị kwụ ọtọ na -enweghị oghere. Mgbe emechara ahịrị, a na -ewepụ ya, enwere ohere karịa na mpaghara egwuregwu. Mgbe enweghị ohere maka ngọngọ ga -ada, egwuregwu agwụla.
KBounce: Ọ bụ otu egwuregwu egwuregwu arcade yiri egwuregwu mgbagwoju anya. A na -egwu ya n'ọhịa, nke mgbidi gbara ya gburugburu, na -enwe bọọlụ abụọ ma ọ bụ karịa gafee n'ọhịa ma na -awụda na mgbidi. Onye ọkpụkpọ ahụ nwere ike ịmepụta mgbidi ọhụrụ site na ibelata nha nke ubi nọ n'ọrụ. Ebumnuche egwuregwu a bụ ijupụta opekata mpe 75% n'ọhịa ka ịga n'ihu na ọkwa ọzọ.
Ngwa ndị ọzọ dị
Ngwa ndị ọzọ etolitere na nke a oke egwuregwu site na "Obodo KDE" bụ:
KBreakout: Egwuregwu yiri Breakout.
KDiamond: Egwuregwu bọọlụ Tic-tac-toe.
KFourInLine: Anọ n'usoro egwuregwu bọọlụ.
KGoldrunner: Egwuregwu gbasara Chọọ ọlaedo, zere ndị iro ma dozie ihe mgbagwoju anya.
Kigo: Egwuregwu bọọlụ «Gaa».
Ogbugbu: Egwuregwu egwuregwu na robots.
Kiriki: Egwuregwu daisị yiri Yahtzee.
KJumpingCube: Egwuregwu mmeri nke ókèala.
Klickety: Egwuregwu bọọlụ.
KMines: Egwuregwu yiri Minesweeper.
KnetWalk: Egwuregwu ụlọ netwọkụ.
Anyasị: Egwuregwu chess.
Kolf: Minigolf egwuregwu.
Kollision: Egwuregwu dị mfe iji gbanarị bọọlụ.
Mmeri: Egwuregwu atụmatụ oghere.
Ndidi: Egwuregwu kaadị ntachi obi.
KReversi: Egwuregwu bọọdụ Reversi.
KShisen: Egwuregwu egwuregwu yiri Shisen-Sho Mahjongg.
Kiri: Egwuregwu nchịkwa ụwa.
AgụụDelụ: Ọsọ na mbara ikuku.
KSpaceDuel: Egwuregwu arcade egwuregwu.
KSquares: Jikọọ ntụpọ ka ịmepụta akụkụ.
KSudoku: Sudoku egwuregwu.
Kubrick: Egwuregwu 3D dabere na Rubik's cube.
LSkat: Egwuregwu kaadị German ochie.
Ahịrị agba: Egwuregwu aghụghọ.
Palapeli: Egwuregwu mgbagwoju anya.
Potato baba: Egwuregwu eserese maka ụmụaka.
Picmi: Egwuregwu egwuregwu.
Na nkenke, anyị na -amụta na nke a ndezigharị nke ise "(KDEApps5)" nke ngwa ukara dị adị nke "Obodo KDE", nke anyị na -agwa ndị nke oke egwuregwu, abụwo ihe na -atọ ụtọ ma baa uru maka ọtụtụ. Na -ejekwa ozi maka mgbasa ozi na itinye ụfọdụ n'ime ndị a n'ọrụ ngwa ọdịnala banyere dị iche iche GNU / Linux nkesa. Nke a, n'aka nke ya, na -atụnye ụtụ n'iji oke na ike dị egwu ngwanrọ software lee ka o si maa mma ma na -arụsi ọrụ ike Obodo Linuxera na -enye anyị niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » KDEApps5: Ngwa KDE Community n'ọhịa egwuregwu
Fairphone + Ubuntu Touch: Akụrụngwa na ngwanrọ na -akwado isi mmalite
Bespoke Synth, onye na -emepụta ụda olu sọftụwia modular sọftụwia